ရှမ်းအစားအစာ မာလာဟင်း လုပ်နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရှမ်းအစားအစာ မာလာဟင်း လုပ်နည်း
ရှမ်းအစားအစာ မာလာဟင်း လုပ်နည်း
Posted by Yin Nyine Nway on Aug 21, 2010 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes |9comments
ညနေစာ ထမင်းလွတ် သူတစ်ပန်းကန်၊ ကိုယ်တစ်ပန်းကန် (ရေနွေးကြမ်းနဲ့ လွေးကြမယ်)
(အသီးအရွက်ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အသီးအရွက်ထည့်လိုရပါတယ်)
ကျွန်မကတော့ ကိုယ်ရှိတဲ့ အသီးအရွက်ပဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဘေဘီပြောင်းဖူး၊ ကိုက်လန်၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ကန်စွန်း ရွက်၊ ကန်စွန်းဥ အဲဒါတွေ မရှိလို့မထည့်လိုက်ပါဘူး။
စောကောဆီကျက်(ကျွန်မကြိုက်လို့ထည့်တာပါ။ မကြိုက်လဲ မထည့်ရင်ရပါတယ်။)
ကြက်သွန်နီ ၂ လုံး၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၅ တက်၊ ခနောကြက်သားမှုန့် တတုံး
ကြက်သွန်နီကို လေးခြမ်းစိတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူကို အရှည်လိုက်ပါးပါးလှီးထားပါ။ ကြက်သားကို အတုံးသေးသေး တုံးထားပါ။ ၀က်သားကတော့ တောက်တောက်စင်းထားပါ။ (ကျွန်မကတော့ တောက်တောက်စင်းပြီးသားကို တခါတည်း ၀ယ်ခဲ့တယ်။ တောက်တောက်စင်းရမှာ ပျင်းလို့ :D) ချက်မယ့်အိုးထဲသို့ ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ဆီကျက်လာရင် လေခြမ်းစိတ်ထားသော ကြက်သွန်နီ၊ ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို ဆီသတ်ပါ။ တုံးထားသော ကြက်သားနဲ့ ၀က်သားတောက်တောက်စင်းကိုထည့်ပါ။ ခဏလုံးထားပါ။ ပြီး မာလဟင်းအနှစ်ထုပ်ထည့်ပါ။ ခနောကြက်သားမှုန့်ထည့်ပါ။ မာလဟင်းအနှစ်ချက်ပြီးရင် အသီးအရွက်များစတင်ပြုတ်လို့ရပါပြီ။ ကိုယ်ထည့်မယ့် အသီးအရွက်အားလုံးကို တမျိုးစီ ပြုတ်ထားပါ။ ရောပြီးပြုတ်လိုက်ရင် အကျက်မညီမှာစိုးလို့ပါ။
သုပ်မယ့် ဇလုံထဲသို့ ချက်ထားသော မာလဟင်းအနှစ်ထည့်၊ ပြုတ်ထားသော အသီးအရွက်စုံထည့်၊ မြေပဲဆံထောင်းထည့်၊ စောကောဆီကျက်ထည့်၊ ငရုတ်သီးကြော်ထောင်း(သို့)ငရုတ်သီးလှော်ထောင်းထည့်ပြီး နယ်ပါလေ။ စပ်စပ်လေးကြိုက်လို့ ငရုတ်သီးများများထည့်လိုက်တယ်။ စားချင်စဖွယ်တော့ လုပ်ထားလိုက်၏။ ကောင်းလေအိ မကောင်းလေအိ……………..(ဆား၊ အချိုမုန့်တို့ကိုလိုအပ်မှ ထည့်ပါ။)
မာလာဟင်းချက်တော့မယ်ဆိုရင် တွဲဖက်စားဖို့ အလိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ အသားကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ မန္တလေးမှာမာလာဟင်း နှင့် အကင်ဆိုင်တွေအရမ်းပေါပါတယ်။(ဘီယာဆိုင်ပေါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်)။
ထမင်းဆီဆမ်းနဲ့ စားကြတယ်။ညနေဆို (၃၅)လမ်းနှင့်လမ်း(၃၀)အကင်ဆိုင်တွေမှာ အရမ်းစည်တာဘဲ။မယုံမရှိနဲ့ နော်မန္တလေးကရပ်ကွက်တိုင်းမှာမာလာဟင်းဆိုင်ရှိတယ်။ တကယ်ပြောတာ။ဆိုင်ကြီး၊ဆိုင်လေး၊ရပ်ကွက်လမ်းဘေးဆိုင် ဒါလေးပဲကွာတယ်။
မန္တလေးကသူတွေ မာလာဟင်းကြိုက်ကြတယ်နဲ့ တူပါတယ်။
အဲဒီမာလာဟင်းကို အိမ်မှာလုပ်စားကြည့်ပါတယ်။ အသီးအရွက်ကိုမိမိနှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်။ စုံလေကောင်းလေဆိုပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေလည်း အစုံမရပါဘူး။ စင်္ကာပူမှာလုပ်စားရင်ဆိုပိုဆိုးပါတယ်။အရွက်စုံရင် ပိုက်ဆံကုန်ပါတယ်။ ပုံမှာလည်းအစုံမပါပါဘူး။မိမိအကြိုက်ဖြစ်သောကြောင့်ဆိုင်မှချက်နည်းများ၊
(ကျွန်မကတော့အလေးချိန်တွေကို မှန်းပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်။နည်းတော့ထပ်ထည့်ပေါ့။အနှစ်များသွားရင် အရွက်ပိုထည့်လိုက်။လွယ်လွယ်လေးပါ။)
မာလာဟင်းနှင့် တွဲဖက်စားသုံးရန် အကင်ကိုတော့နောက်အပတ်မှ ရေးပါတော့မယ်နော်။ ဒီတစ်ပတ်လုပ်စားဖြစ်တဲ့ကြက်ကင်ပေါ့။
အဲ့ မာလာဟင်း ပေါ့ သင်္ကြန်တုန်းက ကောင်းကောင်းမှာသွားစားတာ ပထမဆုံးပဲ . . . ကြိုက်သွားတာနဲ့ . . . သင်္ကြန်ပြီးတော့ တရုတ်တန်းက ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သွားစားတာ ခုထိ နာမည်တောင် မကြားချင်တော့ဘူး . . .
ဟုတ်တယ်….သူက ခဏခဏ စားရင် စားမကောင်းတော့ဘူး
can i know where can i buy မာလာဟင်းအနှစ်ထုတ်??
မာလာဟင်းအနှစ်ထုပ်က စူပါမားကတ်တွေမှာမေးဝယ်လို့ရပါတယ် ။ ငါးမြစ်ချင်းပုံနဲ့ အနှစ်ထုတ်က ချက်လို့ကောင်း စားလို့လဲကောင်းတယ် ။ ပါးစပ်ပိတ်ထားတဲ့ငါးကိုပြောတာနော် ။ ပါးစပ်ဟနေတဲ့ ငါးရုပ်နဲ့အနှစ်က သိပ်မကောင်းဘူး ။ အပုလေးအကြိုက်ကို ပြောတာနော် ။
မာလာဟင်းချက်ရင် အာဖျံကွီးက ဆရာပဲ … ဟဲဟဲ.. ဒါပေမဲ့ ရယ်ဒီမိတ်ဟင်းအနှစ်နဲ.ပဲချက်တာ .. အနှစ်လုပ်နည်းမသိလို. …
အခု ရင်ငြိမ်းဆီက အနှစ်လုပ်နည်းကူးသွားတယ် .. ပီးရင် စမ်းချက်ကြည့်မယ် ..
ဒါချို ယဉ်ငြိမ်းနဲ့ ပေါင်းလို့ ရပီ
မချက်တော့ မချက်ချင်ဘူး။ ချက်ပြီးသားတော့ စားချင်တယ် အဟိ… မေမေ့ကို ချက်ခိုင်းဦးမယ်နော်။
မာလာဟင်းတော့ တစ်ခါအိမ်မှာ လုပ်စားဖူးတယ် ဆိုင်မှာစားရသလောက် အရသာမတွေ့လို့ ထပ်မလုပ်စားဖြစ်ဘူး အခု ရင်ငြိမ်း နည်းနဲ့ထပ်လုပ်စားကြည့်ဦးမှ
မာလာဟင်းလုပ်စားရတာ လက်ဝင်တယ်နော်… ။ စိတ်မရှည်ဘူး … ။ ပြီးတော့ ဆိုင်ကလုပ်တာလောက်မကောင်းဘူးဖြစ်နေလို့ ၀ယ်စားတာ ပိုအဆင်ပြေတယ် ဟီးဟီး